Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Fameperana Fizahantany Vaovao any UK? Mampaneno lakolosy fanairana ny WTTC
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Matahotra ny WTTC fa ny fameperana hafa momba ny COVID-19, izay hisy fiantraikany amin'ny sehatry ny Travel & Tourism, dia mety hahatonga an'i UK ho toerana tsy dia manintona loatra eo amin'ireo mpandeha ary ho faty kosa ny UK.
Efa ho 180,000 ny asa Travel & Tourism UK mety ho very raha miverina ny fameperana, hoy i WTTC
Asa hatramin'ny 180,000 no mety ho very manerana ny sehatry ny Travel & Tourism UK amin'ity taona ity, raha averina ny famerana ny fitsangatsanganana amin'ity ririnina ity, araka ny angon-drakitra vaovao manaitra avy amin'ny World Travel & Tourism Council (WTTC)
WTTC, izay misolo tena ny orinasa Travel & Tourism tsy miankina lehibe indrindra eran-tany, dia nanao ny fampitandremana taorian'ny famakafakana izay mampiseho ny fiantraikan'ny fanamafisana ny sisintany.
Ireo tarehimarika ireo dia nambaran'i Julia Simpson, Filoha & Tale Jeneralin'ny WTTC, nandritra ny fihaonamben'ny Tourism Alliance 2021, hetsika lehibe iray izay hiresahan'ny mpitarika ny indostria ny fomba hananganana indray ny sehatry ny Travel & Tourism UK.
Mety hisy fahasimbana bebe kokoa amin'ny sehatra efa niady raha misy fameperana vaovao apetraka, toy ny fepetra vaovao mety hahitana ny mpandeha rehetra mitaky jab booster alohan'ny handehanana any ampitan-dranomasina.
Ny tatitra vao haingana dia milaza fa io no heverin'ny minisitra amin'ny fikasana hampitombo ny fiarovana amin'ny COVID-19 ho an'ireo vita vaksiny tanteraka.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy ho an'ny 50 taona mahery, hatreto, latsaky ny 20% amin'ny mponina any Angletera no nahazo ny jab booster. Misolo tena ny vitsy an'isa amin'ireo afaka mivezivezy izany, ary ny hetsika toy izany dia hamela olona an-tapitrisany tsy ho afaka handeha any ivelany, ary hisy fiantraikany ara-toekarena goavana vokatr'izany.
Raha toa ka nampiharina tamin'ny 2022 ny fameperana midadasika, toy ny famerana ny fitsangatsanganana ho an'ireo manana jab booster, dia mihoatra ny antsasa-tapitrisa no mety ho asa amin'ny herintaona.
Julia Simpson, Filohan'ny WTTC & Tale Jeneralin'ny WTTC dia nilaza hoe: "Ny tena fahatsinjovana olona maherin'ny 500,000 very asa manerana ny sehatry ny Travel & Tourism UK noho ny famerana ny fitsangatsanganana tsy ilaina dia mampanahy be amin'ny WTTC.
“Tsy azontsika atao ny mamela ny fandrosoana rehetra vitantsika tamin'ity taona ity, hihemotra ary hivadika. Be loatra ny fiveloman'ny olona no tandindomin-doza, ary koa ny fitohizan'ny fanarenana ara-toekarena any Angletera. ”
Tamin'ny taon-dasa, ny fikarohana WTTC dia nanambara asa 307,000 Travel & Tourism very, niteraka fahoriana ho an'ireo izay miantehitra amin'ny sehatra miroborobo ny fivelomana.
Fanampin'izay, ny tatitra vao haingana nataon'ny WTTC dia nampiseho fa ny fameperana henjana napetraky ny governemanta UK, toy ny rafitry ny jiron'ny fifamoivoizana manimba, dia hahita ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika iraisam-pirenena ho latsaka saika 50% amin'ny tarehimarika 2020, ka mahatonga an'i UK ho iray amin'ireo firenena manana vokatra ratsy indrindra ao amin'ny firenena. izao tontolo izao.
Ny famakafakana fanampiny avy amin'ny WTTC dia mampiseho fa ny governemanta dia afaka mahita hatramin'ny £ 5.3 lavitrisa voafafa amin'ny fandraisan'anjaran'ny sehatra ho an'ny toekarena alohan'ny faran'ny taona 2021 raha miverina an-kery ny fameperana fitsangatsanganana.
Matahotra ny sampan-draharahan'ny fizahantany eran-tany fa raha mijanona ho mihidy amin'ny toerany ny fameperana amin'ny taona ho avy, dia mety hiteraka fatiantoka hatramin'ny £ 21.7 miliara avy amin'ny toekarena UK izany.